Miala any ny mpamono afo: manameloka ny fitokonana ny sendikàn’ny paositra | NewsMada
Miala any ny mpamono afo: manameloka ny fitokonana ny sendikàn’ny paositra
Tsy ilaozan’ny famonoana afo hatrany. Tsy mankasitraka ny fitokonana na hetsika fitakiana ataon’ny sendikà sasany ny sendikàn’ny mpiasan’ny paositra.
“Inona ny tombontsoa raha mitokona. Tsy misy vola miditra raha tsy miasa ary tsy mihodina ny orinasa. Ekena fa tokony hojerena ny tombontsoan’ny mpiasa, saingy tsy maintsy jerena koa ny tombontsoan’ny orinasa ahafahana manatanteraka ny fitakiana”, hoy ny eo anivon’ny Sendikàn’ny mpiasan’ny paositra ny faran’ny herinandro teo. Nanteriny fa miteraka korontana ary tsy mitondra fampandrosoana ny hetsiky ny sendikà sasany ary manana endrika politika. “Ny hiafarany anefa, tsy maintsy misy hatrany ny fifampiresahana ka aleo mifampidinika… Tsy manakatona varavarana ny tompon’andraikitra na ny minisitera fa vonona hatrany hifampiresaka amin’ireo sendikà rehefa misy ny tokony hifampiresahana”, hoy ihany izy. Midika izany fa tsy miray feo amin’ireo sendikà marobe naneho fitakiana, tato ho ato, ity sendikàn’ny mpiasa eo anivon’ny paositra ity. Milamina ny ao amin’izy ireo. Minisitra HVM rahateo ny mitantana ny minisitera. Hadinon’izy ireo anefa fa fitakiana ny hampiharana ny didim-pitsarana, ohatra, ny anton’ny nampitokona ny SMM. Fitakiana ny fahaleovantenan’ny fitsarana sy ny mpitsara. Tahaka izany koa ny eo anivon’ny Sendikàn’ny Air Madagascar.
Fitondrana manao bemarenina
Mitaky ny hamerenana ireo mpiasa nesorina tamin’ny toerany ary efa namoahan’ny fitsarana didy ny tokony hiverenan’izy ireo eo anivon’ny as any sendikàn’izy ireo, saingy tsy notanterahina izany. Nandalo fifampiresahana avokoa izany, saingy manao bemarenina ny fitondrana. Miandry omena fe-potoana farany hatrany vao taitra sy mikoropaka ary manangana izao karazana komity na vaomiera samihafa izao. Manana ny fitakiany ny Seces, ny Sempidou, ny mpirakidraharaha fitsarana…
Anisan’ny mahatonga izany koa ny lonilony amin’ny fahitana fa misy ampahan’olona na mpitondra eto, omena tombony manokana fa ny hafa, tsy mba mahazo. Ohatra, nampiakarina ny tombontsoa samihafa sy ny tambin-karaman’ireo depiote… Rehefa inona sy iza no mahazo tombony sy omena fahafaha-po… Anisan’ny nahazo tombony izany ny Sendikàn’ny mpiasan’ny paositra ka manenjika sy manaraby ny sendikà namany ?